အခုလိုကာလမှာ လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆွယ်အင်အားပြနေသူတွေကို ကန့်ကွက်လိုက်တဲ့ ဖိုးချစ် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ပရိသတ်ကြီးရေ လက်ရှိအချိန်ကတော့ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် အသွားအလာကန့်သတ်ထားတဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်ပေမယ့် လာမယ့်(၂၀၂၀) ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်ကာလလည်းဖြစ်တာမို့ ပါတီဝင်တွေအသင်းအဖွဲ့အလိုက် စည်းရုံးရေးဆင်းနေကြတာကိုလည်း တွေ့မြင်ကြမှာပါ။
ဖိုးချစ်ကတော့ အခုလိုအနေအထားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်သင့်ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေလာပါတယ်။ “ဒီလိုကာလမှာ အပြင်ထွက် လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆွယ် သူတွေ အင်အားပြသူတွေ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ကန့်ကွက်ပါတယ် ( မလုပ်သင့်သေးသော အချိန်မို့ပါ )အင်အားပြရင်း အင်အားလျော့သွားမယ့် အနေအထားပါဗျာ… နောက်တစ်ခုက ဘယ်သူပိုးတွေ့လို့တဲ့ ဘယ်အဖွဲ့တဲ့ ဆိုပြီးကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူသူ အယူအဆမတူသူ ကိုယ်အဆင်မပြေတဲ့သူ ပိုးတွေ့ရင် လူသားမဆန်စွာ ဝမ်းသာသလို ရေးတဲ့သူတွေ အားလုံး ကို လုံးဝ လုံးဝရှုတ်ချပါတယ်…. လူသားဆန်ခြင်း ဆိုတာ အရောင်ကာလာ မခွဲရဘူး….
သူ့ဒုက္ခ ကိုယ့်ဒုက္ခပါ.. သူ့တဲ မီးလောင်ရုံနဲ့ ကိုယ့်အိမ်က တိုက်ဖြစ်မလာဘူးဗျ…. မေတ္တာအစစ်ဆိုတာ အားလုံးအပေါ်ထားနိုင်ရမယ်… ကရုဏာဆိုတာ အားလုံးအပေါ်ထားနိုင်ပါစေ.. မုဒိတာ ဆိုတာ အကုန်လုံးအပေါ် ပွားနိုင်ရမယ်… ဥပေက္ခာဆိုတာ ဆိုးခြင်းကောင်းခြင်းနှစ်ခုလုံးကို လျစ်လျူရူ နိုင်ရမယ် မဟုတ်ပါလားဗျာ ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အမြင်လေးကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ လူသားဆန်စွာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မခွဲခြားဘဲ ရောဂါဆိုးကြီးကို တွန်းလှန်ကြဖို့က နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အဓိကတာဝန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖိုးချစ်ရဲ့အတွေးလေးကို ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။